Muslim Book – Page 50 – Onlin Muslim Book
နေကာဟ်သည် ငါကိုယ်တော်၏ စွန္နသ်တော် ဖြစ်သည။် အကြင်သူသည် ငါကိုယ်တော်၏ စွန္နသ်တော်အား မနှစ်သတ်ပါကထိုသူသည် ငါ၏ အွမ္မသ်အသင်းထားထဲမှ မဟုတ်ပါ ။ (သဘောမှာ) ငါကိုယ်တော်၏ လမ်းစဉ်တော်၌မရှိပါ။ တမန်တော်မြတ် (ဆွလလ္လားဟို့အလိုင်းဟေ့ဝစလ္လမ်)သ္ခင် အမိန့်ရှိလေသည်။ နေကာဟ်သည် အီမာန်၏တစ်ဝက်ဖြစ်သည်။(သဘောမှာ)နေကာဟ်မလုပ်ခင်မှာ ရှရီအသ်ရဲ့အအ်မာလ်များကြောင့် အီမာန်တစ်ဝက်ဘဲရှိလေသည်။ နေကာဟ် လုပ်ပြီးနောက် အီမာန်ပြည့်ဝသွားလေသည။် တမန်တော်မြတ် (ဆွလလ္လားဟို့အလိုင်းဟေ့ဝစလ္လမ်)သ္ခင်အမိန့်ရှိလေသည်။ အကြင်သူသည်အမျိုးသ္မီး၏
သေဆုံးကွယ်​လွန်​ပြီး​သော မိဘများအတွက်​ အ​ကောင်းဆုံး အမလ်​ကျင့်​စဉ်​ များ”
သေဆုံးကွယ်​လွန်​ပြီး​သော မိဘများအတွက်​ အ​ကောင်းဆုံး အမလ်​ကျင့်​စဉ်​ များ” 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 🌟မိမိ၏ မိဘများ ကွယ်​လွန်​သွားခဲ့​သော်​ ဘာ​တွေဖတ်​ရွတ်​ရမလဲ ဘာ​တွေပြုကျင့်​ရမလဲ ​မေး​နေတဲ့ ညီ​နောင်​မွစ်​စလင်​အ​ပေါင်းတို့အား ကျွန်​​တော်​​ပြောပြလိုက်​ပါတယ်​ ။ ☛မိမိ၏မိဘ​တွေဟာ ကွယ်​လွန်​ပြီး ယခုချိန်​မှာ ကဗရ်​​တွေ သူတို့၏ ပြုကျင့်​ခဲ့​သော်​ မ​ကောင်းမူများအတွက်​ အပြစ်​အဇားဗ်​​တွေ ခံ​နေရပါပြီး 😢 ထိုအတွက်​ သူတို့၏ အပြစ်​အဇားဗ်​​တွေ လွတ်​ငြိမ်းဖို့နှင့်​ ​​ရှေ့ဆက်​လမ်းခရီး​တွေ
ကိုယ့်ကို အလ္လာဟ်နဲ့ ပိုနီးကပ်စေသူ…. နေ့စဉ် အလ္လာဟ့်ကို သတိရစေသူ….. ကိုယ့်ကို ဂျန္နသ် အထိ လက်တွဲ ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့သူမျိုးကိုသာ လက်ထပ်ပါ….. ကိုယ့်မျက်ဝန်းထဲမှာမျက်ရည်ဖြစ်ထွန်းစေမယ့်သူအစား ကိုယ့်မျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်ကိုသုတ်ပေးမယ့်သူအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ….ထိုက်တန်သူအတွက် ကိုယ့်ဘေးမှာ နေရာလွတ်ရှိနေပါစေ…. ကိုယ့်နဲ့ပတ်သတ်လာရင် သူ့နှလုံးသားထဲမှာ နူးညံ့မူ့တွေသာ ရှိတဲ့သူအတွက် နေရာသတ်မှတ်ထားပါ…. ချစ်သူမိန်းကလေး ချစ်သူယောင်္ကျားလေး ဆိုတဲ့အရာတွေကဒီ ဒွန္နယာ
Mohamed Rahin | October 19, 2019
၁/အိစ်သဂ်ဖွာရ်၊(နံနက် ညနေ ၁၀၀ စီ) အပြစ်များခွင့်လွတ်ခံရမယ်။ရိုဇီရိက္ခာတိုးပွား များပြားမယ်။ရန်အပေါင်းကနေကင်းဝေးမယ်။ စကရားသ် လွယ်ကူမယ်။သောကအပေါင်းက နေကင်းလွတ်မယ်။ကျပ်တည်းမှုကနေချောင် လည်မှုရရှိမယ်။မထင်မှတ်တဲ့နေရာကနေ ရိုဇီ ရမယ်။ကဗရ်မှာလင်းဝင်းမယ်။စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုမရှိ ဂျန္နသ် ဝင်ရမယ်။ ၂/ဒရူးဒ်ရှရီးဖ်၊(နံနက် ညနေ ၁၀၀ စီ) တမန်တော်မြတ်အပေါ် ဒရူးဒ် တစ်ကြိမ်ပို့ပါက Allah က အဲဒီသူအပေါ် ရဟ်မသ်ကရုဏာ ဆယ်ကြိမ်ပို့ပေးတယ်။ကောင်းကင်တမန်များရဲ့ ဒုအာ ရမယ်။အပြစ်တွေခွင့်လွတ်ခြင်းခံရမယ်။အဆင့်အတန်းမြင့်မယ်။အိုဟုဒ်တောင်နဲ့အမျှ
အလွန်​မြန်​ဆန်​စွာ ခွင့်​လွှတ်​​ပေးသနား​တော်​မူ​သော အရှင်
တမန်​​တော်​ မူစာ (အလိုင်းဟိစ္စလာမ်​) ​ခေတ်​မှာ တ​ခေါက်​ မိုးလုံးဝမရွာပဲ လူ​တွေ​တော်​​တော်​ ဒုက္ခနဲ့ရင်​ဆိုင်​​နေရရှာတယ်​ .. လူ​တွေက တမန်​​တော်​ မူစာ (အလိုင်းဟိစ္စလာမ်​) သခင်​ရှိကို​ရောက်​လာကြပြီး အလ္လာဟ်​အရှင်​ဆီက​နေ မိုးရွာသွန်း​ပေးဖို့ လာ​တောင်းဆိုကြတယ်​ အဲ့​တော့ တမန်​​တော်​မူစာ (အလိုင်းဟိစ္စလာမ်​) သခင်​ကလည်း လူ​တွေအားလုံးကို စုလိုက်​တယ်​ ပြီး​နောက်​ နဖိလ်​ နမားဇ်​ကို ​ဆောက်​တည်​ပြီး မိုးရွာသွန်းဖို့
အကြင်​နာ​တွေ ပို​ပေးပါ _
မိဘနှစ်ပါး အိုလာချိန်မှာ စေတနာတွေ ယခင်ကထက်ပိုပေးပါ။ မိဘနှစ်ပါး အိုလာချိန်မှာ အပြုစုတွေ ယခင်ကထက်ပိုပေးပါ။ မိဘနှစ်ပါး အိုလာချိန်မှာ မေတ္တာတွေ ယခင်ကထက်ပိုပေးပါ။ မိဘနှစ်ပါး အိုလာချိန်မှာ ယုယမှုတွေ ယခင်ကထက်ပိုပေးပါ။ မိဘနှစ်ပါး အိုလာချိန်မှာ ကြင်နာမှုတွေ ယခင်ကထက်ပိုပေးပါ။ မိဘကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားတဲ့သားသမီးတိုင်း စိတ်သာချပါ။ သင်တို့ အားလုံးလည်း စိတ်ချမ်းသာရပါလိမ့်မယ် တန်ပြန်သက်ရောက်မှုဆိုတာ
အဇာဗ်ပြစ်ဒဏ်ခံနေရမည့် အမျိုးသမီး( ၆ )ဦး
သွားလာ လှုပ်ရှားရင်း နိစ္စဓူဝ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရင်း အောက်ပါ ဒုအာကို များစွာဖတ်ပါ